ground zero(ground zero) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
ग्राउन्ड जिरो : ‘बैंकको पालो कहिले आउँछ ? कुर्दा–कुर्दा हैरान भइयो’
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । नियमितजसो साताको पहिलो दिन आइतबार हामीले राजधानीका विभिन्न ब्रोकर हाउसमा पुगेर लगानीकर्ताको विचार बुझ्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौँ। यही क्रममा आज हामी नक्साल र कमलादीमा रहेका विभिन्न ब्रोकर हाउस पुग्यौँ। सुरुमा हामी नक्सालस्थित सनी सेक्युरिटिज स्टक ब्रोकर नम्बर ४२ मा पुग्दा लगानीकर्ता आउने...
ग्राउन्ड जिरो: ‘राष्ट्र बैंकले अर्थ समितिको निर्देशन मान्नुपर्छ नि ! आज यो अवस्था नै आउने थिएन’
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सधैँजस्तै साताको पहिलो दिन आइतबार हामीले ब्रोकर हाउसमा पुगेर लगानीकर्ताका विचार र गतिविधि बुझ्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ। यसै सिलसिलामा आज हामी बिहान ११ बज्दा–नबज्दै काठमाण्डौ सुन्धारास्थित सुन्धारा ब्रोकर हाउस स्टक ब्रकर नम्बर ५२ मा पुग्यौँ । बिहानैदेखि ब्रोकर हाउसमा लगानीकर्ताको...
ग्राउन्ड जिरो: संस्थापकले धमाधम हाइड्रोको सेयर बेचेको चर्चा, ‘सेयर कर्जा सीमाले बजार घट्यो’
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सधैँझैँ यो साताको पहिलो दिन आइतबार पनि हामी बिहान ११ बज्दा नबज्दै काठमाण्डौका विभिन्न ब्रोकर हाउसमा पुगेर लगानीकर्ता तथा ब्रोकर हाउसका सञ्चालकहरुको विचार बुझ्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौँ। देशमा भदौरे झरीले निरन्तरता पाइरहेकै बेला सेयर बजार पनि निरन्तर ओरालो लाग्दा ब्रोकर हाउसहरुमा...
ग्राउन्ड जिरो : मौद्रिक नीतिले द्विविधामा सेयर लगानीकर्ता, भन्छन्, ‘मिलेमतोमा बजार घटाए’
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सधैँको जस्तै साताको पहिलो दिन आइतबार पनि हामीले विभिन्न ब्रोकर हाउसमा पुगेर लगानीकर्ताका विचार बुझ्ने कोसिसलाई जारी राखेका छौँ। आज पनि हामी काठमाण्डौका विभिन्न ब्रोकर हाउसमा पुगेका थियौँ। ब्रोकर हाउसमा नयाँ तथा पुराना लगानीकर्ताको उपस्थिति राम्रै थियो। धेरैजसो नयाँ लगानीकर्ता केवाईसी अपडेट...
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सधैँझैँ यो साताको पहिलो दिन आइतबार हामीले लगानीकर्ताका विचार र ब्रोकरका गतिविधि बुझ्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौँ। कोभिडको प्रभाव र अनलाइन सुविधाका कारण ब्रोकर हाउसमै उपस्थित भएर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या पातलिँदै गएको देखिन्छ। अधिकांश लगानीकर्ता घरबाटै कारोबार गर्ने गरेका छन् भने...
ग्राउन्ड जिरो : लगानीकर्ताको जिज्ञासा– ‘अब बैंककै पालो हो त ?’
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सधैँजस्तै यो साताको पहिलो दिन आइतबार हामी विभिन्न ब्रोकर हाउस पुगेर लगानीकर्ताको विचार सुन्ने तथा बुझ्ने क्रमलाई जारी राखेका छौँ । यो साता पहिलो दिनै सेयर बजारमा रौनक देखियो भने ब्रोकर हाउसमा लगानीकर्ताको उपस्थिति राम्रै पाइयो। बिहान ११ बज्दा नबज्दै अनामनगरस्थित स्टक ब्रोकर हाउस नम्बर ३४ भिजन...
ग्राउन्ड जिरो : ‘नयाँ अर्थमन्त्री पुँजी बजारप्रति सकारात्मक नै छन्, बजारमा उछाल आउनेछ’
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सधैँजस्तै साताको पहिलो दिन आइतबार हामी विभिन्न ब्रोकर हाउस पुगेर लगानीकर्ताका गतिविधि बुझ्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ। आर्थिक वर्षको पनि पहिलो कारोबार दिन सेयर बजारमा हरियाली तथा लगानीकर्तामा उत्साह तथा उमंग देखियो। ब्रोकर हाउसहरुमा विभिन्न कामले लगानीकर्ताको उपस्थिति बाक्लै देखियो।...
ग्राउन्ड जिरो : ‘फेरि आयो चमक, अब सेयर बजार बढ्नेमा छैन दुईमत’
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सधैँझैँ यो साताको पहिलो दिन आइतबार हामी राजधानीका विभिन्न ब्रोकर हाउसमा पुगेर लगानीकर्ताका विचार सुन्ने तथा बुझ्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिएका छौँ। लगातार घटेको बजारमा आज दिनभर रौनक र चमक देखियो। आज धेरैजसो ब्रोकर हाउसमा लगानीकर्ताको उपस्थिति पनि राम्रै थियो। ब्रोकर हाउसहरुमा स्वास्थ्य...
ग्राउन्ड जिरो : द्विविधामा लगानीकर्ता, सेयर बजार लयमा फर्किने आशा पनि उत्तिकै
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । गत वैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञाका कारणले ब्रोकर हाउसमा लगानीकर्ताको उपस्थिति नहुँदा हामीले पनि हाम्रो सेसन ‘ग्राउन्ड जिरो’ स्थगित गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत लगानीकर्ताका विचार लिँदै आएका थियौँ। निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै जाँदा लामो समयपछि आज हामीले फेरि ब्रोकर हाउसमै पुगेर लागानीकर्ताका विचार...
ग्राउन्ड जिरो : ‘किन्ने रातोमा, बेच्ने हरियोमा !’
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ। कोरोना महामारी बढ्दो छ। आज सेयर बजारमा पनि कोरोना प्रभाव परेजस्तो देखियो। यो साताको पहिलो कारोबार दिन पनि हामीले आफ्नो नियमित स्तम्भ ‘ग्राउन्ड जिरो’ का विभिन्न ब्रोकर हाउसमा पुग्यो। यसै सिलसिलामा हामी आज बिहान ११ बज्दा नबज्दै राजधानीको नक्सालस्थित थ्राइभ ब्रोकर हाउस स्टक ब्रोकर नम्बर १३ मा...
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आइतबार पनि हामीले आफ्नो ‘ग्राउन्ड जिरो’ स्तम्भलाई निरन्तरता दिन राजधानीका विभिन्न ब्रोकर हाउस पुगेर लगानीकर्ताहरुमा हुने भलाकुसारी बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। यही क्रममा बिहान ११ बज्दै गर्दा राजधानीको कालिकास्थानस्थित नेपाल स्टक हाउस ब्रोकर नं. १४ मा...
ग्राउन्ड जिरो : ब्रोकर हाउसमा ननलाइफको चर्चा, कलाकारको चासो, ‘किन बढेको हो बजार दिनदिनै?’
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सधैँजसो यो साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार हामी राजधानीका विभिन्न ब्रोकर हाउसमा पुग्यौँ। ब्रोकर हाउस पुगेर आम लगानीकर्ताको विचार तथा बजारको बस्तुस्थिति बुझ्ने हाम्रो मुख्य ध्येय हो। यसै सिलसिलामा आज हामी राजधानीको व्यस्त ठाउँ तथा नेप्से चोक भनेर चिनिने कमलादीस्थित विभिन्न ब्रोकर हाउस...
ग्राउन्ड जिरो : ब्रोकर हाउसदेखि कफीसपसम्म सेयर बजारकै चर्चा, ‘चन्द्रागिरीमा हाई रिस्क !’
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सधैँजस्तै यो हप्ता पनि ग्राउन्ड जिरोअन्तर्गत हामी राजधानीका विभिन्न ब्रोकर हाउस पुगेका छौँ। यसै सिलसिलामा बिहान ११ बज्दा नबज्दै हामी काठमाण्डौको सुनधारास्थित सुनधारा सेक्युरिटिज ब्रोकर नं. ५२ पुग्दा लगानीकर्ताको भीड लागिसकेको थियो। केही लगानीकर्ता ब्रोकर हाउसभित्रै आआफ्नो ल्यापटपमा बजार...
ग्राउन्ड जिरो : ब्रोकरहाउसमा सेयरको मात्र हुन्न गफ, प्रेम र विछोडको पनि हुँदोरहेछ चर्चा
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ। सधैँको हप्ताजस्तै आज आइतबार पनि हामीले लगानीकर्ताको विचार र बहस सुन्न राजधानीका विभिन्न ब्रोकरहाउसमा पुग्ने क्रमलाई जारी राखेका छौँ। यसै सिलसिलामा आज हामी ११ बज्दानबज्दै राजधानीको कालिकास्थानस्थित नयाँ भवनमा सरेको नेपाल स्टक हाउस ब्रोकर नं. १४ मा पुग्यौँ। बिहानैदेखि त्यहाँ लगानीकर्ताको...
ग्राउन्ड जिरो : ब्रोकर हाउसमा सेयरभन्दा राजनीतिको चर्चा बढी, डिस्प्ले नखुलेकोमा आक्रोश
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ। सधैँझैँ नियमित स्तम्भ ग्राउन्ड जिरोका लागि हामी धितोपत्र कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आइतबार राजधानीको कमलादीस्थित विभिन्न ब्रोकर हाउस पुग्यौँ। ब्रोकर हाउसहरुमा पुगेर हामी लगानीकर्ताका विचार तथा गतिविधि बुझ्ने क्रमलाई जारी राखेका हौँ। यसै सिलसिलामा बिहान ११ बज्दा नबज्दै कमलादी तथा...